Fedora 29 Beta Waa La Siideyn Doonaa Usbuuca Soo Socda | Laga soo bilaabo Linux
Dhawr bilood ayaa ka soo wareegtay tan maxaa lagu dhawaaqay sii deynta rasmiga ah ee nooca xasilloon ee ugu dambeeyay ee Fedora, oo ah Fedora 28.
Tan iyo markaas, horumariyeyaasha Fedora ayaa u heellan qayb ka mid ah shaqadaada si aad u horumariso waxa noqon doona nooca xiga ee Fedora 29.
In kasta oo ragga ka dambeeya horumarinta qaybtan wanaagsan ee Linux ay leeyihiin jadwal la sii daayo, taariikhahaas marwalba lama kulmin.
1 Beta weli diyaar ma ahan
1.1 In la sugo
Beta weli diyaar ma ahan
Fedora 29 Beta waxaa loo qorsheeyay in la sii daayo oo la qorsheeyay qiyaastii Sebtember 14 ee sanadka socda.
In kasta oo tani ku dhowaad caado noqotay: aragtida nidaamka lama heli doono toddobaadkan sidii la qorsheeyey, laakiin Sebtember 25 ... waxaan rajeynayaa.
Horumariyayaashu wali waxay ku shaqeynayaan musharaxa sii deynta beta, laakiin lCayayaanka ugu waaweyn wali lama xalin, mid ka mid ah gaar ahaan, inkasta oo aanu wax saamayn ah ku lahayn kombuyuutarrada desktop-ka ah, haddii uu ku dhaco mid jeebka ku jira
Taasina waa in nidaamku uusan hadda ka bilaaban Raspberry Pi.
Soosaarayaasha Fedora waxay yeesheen kulan dhowr maalmood ka hor, halkaas oo ay waxoogaa ka wada hadleen arrinta oo ay ku faafiyeen khaladaadkii dhacay markii la go'aamiyay in nooca beta uusan wali diyaar u ahayn in la raro.
In kasta oo ay jireen 5 nooc oo musharrax ah oo loo sii deyn doono sidii beta, kuwani waxay lahaayeen cilado taxane ah oo qaar ka mid ah cayayaanka GNOME ay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan.
In kasta oo ay suurtagal tahay in laga fikiro in nooca Beta si hufan loo sii daayay si loo helo khaladaad badan intii suurtagal ah ka hor intaan isbeddellada la sifeynin oo cilladaha la hagaajiyo si ay u awoodaan inay bilaabaan nooc deggan.
Xaqiiqdu waxay tahay in noocyadan 'Beta' waa inay ahaadaan kuwo "xasiloon" si loola hadlo iyo in labada isticmaale ee caadiga ah ee damacsan inay wax yar maraan iyo sidoo kale kuwa horumariya iyo dadka aqoonta leh ay ku darsan karaan badarkooda ciidda.
Noocyada beta ayaa ugu dambeyntii ugu muhiimsan. Imtixaanada ikhtiyaariga ahi way yar yihiin, laakiin weli waxay faa'iido u leeyihiin inay socdaan.
Dhacdadu waxay tilmaamaysaa in daabacaadda dhacdadaas ama ansixinta sii deynta xigta, imtixaanku waa inuu ka hor yimid nooca musharraxa sii deynta (sidaa darteed, Beta, dhammaan tijaabooyinka alfa iyo beta waa inay socdeen, tusaale ahaan ).
Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in loo ordo imtixaannada dhammaan dhacdooyinka sida ugu horreysa iyo sida ugu macquulsan.
In la sugo
Ugu dambeyntii, sidoo kale kooxda horumarinta laguma eedeyn karo ama ka gudub jebinta taariikhaha, maxaa yeelay ka dib oo dhan, waa nooc Beta ah oo ay ka shaqeyneyso inay u siiso sida ugu macquulsan.
Aniguna waxaan u leeyahay fikirkaan marka la barbardhigo "buntu" halkaasoo maalmo yar uun ka dib markii ay bilaabeen nooca "xasilloon" ay horeyba u bilaabeen sawirro tijaabo ah oo ah nooca noqon doona nooca soo socda.
Kaliya sug kuwa xiiseynaya inay helaan waxa soo socda ee Fedora Beta ay noqon doonto oo arag waxa ay maanka ku hayaan iyo qorshayaasha hal-abuurnimo ee inbadan oo naga mid ah ay filayaan, kuwaas oo uguyaraan qaabkoodii hore ay wax weyn ka badaleen.
Iyadoo liistada cayayaanka wali ay tahay in la xalliyo iyo soo bandhigida cusub ee Fedora 29 Beta ayaa horayba looga shaqeynayay.
Nidaamka sixitaanka ayaa lagu tilmaamay oo la bilaabay Sebtember 14-keedii, iyada oo wax waliba si fiican u socdaan, mashruucu wuxuu aaminsan yahay in nooca tijaabada Fedora 29 uu diyaar noqon doono usbuuca soo socda.
Xilligan, nooca Beta ee Fedora 29 wuxuu imaan doonaa qeybta ugu dambeysa dhamaadka Oktoobar. Haddii beta uu sii wado in la diido, taariikhda sidoo kale way dhici kartaa.
Kuwa jecel inay ku wargeliyaan waxa dhacaya maalinba maalinta ka dambeysa horumariyayaasheeda cusub ee Fedora Beta, way ka sameyn karaan xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Fedora 29 Beta ayaa la sii dayn doonaa usbuuca dambe